Soosaarka beeraha Sweden oo aan ku jiri karin xaalad dagaal - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Lo' caano laga lisayo. sawir: Sawirle: Lars Pehrson/SvD/TT
Soosaarka beeraha Sweden oo aan ku jiri karin xaalad dagaal
Diyaargarow liita ee dhanka beerlalayda haddii dagaal dhaco
La cusbooneeyay måndag 12 december 2016 kl 12.38
La daabacay måndag 12 december 2016 kl 09.56
Wax soo saarka beeraha Sweden ayay ku adkaan lahayd inuu halkiisa ka sii socdo haddii uu dalku galo xaalad dagaal oo daba dheeraata.
Sidaa waxay ku cadaatay baaris amuurtaa la xiriirta ee laga wado jaamicadda beeraha Sweden.
Mid ka mid ah beeralayda Sweden oo ay caqabaduhu kala soo gudboonaan lahaayeen haddii la galo xaalad cakiran oo daba dheeraata tusaale ahaan in Sweden ay caalamka ka takooranto ayaa ah lo’lay Thomas Bäck oo lo’ ku haysta nawaaxiga degmada Norrtälje.
– Halka waxaa ku dhaqan tiro gaarsii-san 120 lo’, laga yaabee iney yihiin 130.
Thomas Bäck ayaa tusaya suxufiga goobta ey lo’du ku dhaqan tahay iyadoona la maqlayo sawaxanka dhuun tubbo ah oo ey marayaan caanaha laga lisayo lo’da, iyo sidoo kale mashiinnada caanaha ka lisaya lo’da, Waa mashiinno iskood u shaqeeya oo lo’layda u sahleya howlahooda, hase yeeshee kordhinaya baahida loo qabo tamarta korontada.
– Haddii korontada la xiro waxaan awood u leenahay in aannu muddo toddobaad ah soo saarno tamar aannu annagu soo saarnay, inta mashiinnada ay ka dhammaanayaan shidaalku.
Marka caano dambe la idinka fili maayo?
– May, caano dambe la iga fili maayo oo aan ahayn caano aan ugu talo galay naftayda.
Laga soo bilaabo sannadihii sagaashameeyadii, wixii ka dambeeyay dagaalkii qaboobaa dhmmaadkiisii, ayaanay Sweden lahayn wax diyaargarow ah ee ku wajahan beeralayda. Tusaale ahaan haddii u dhaco dagaal daba dheeraada oo ey xirmaan waddooyinka ay dalkan u soo marto tamartu, middaasina oo sababi lahayd in aannu dalkani helin wax soo-saar cunno oo ka soo baxa ee la quuto, sida ay sheegtay baare Camilla Eriksson oo ka howl-gasha jaamicadda beeraha Sweden, isla-markaana qayb ka ah mashruuc iminkaba socda ee wax looga ogaaneyo diyaargarowga beeralayda.
– Maanta xaaladdaasi ma jirto. Waxaan sidoo kale aan jirin bakhaaro loogu talagalay oo wax lagu keeydiyo.
Hase yeeshee is-bedelka ammaanka caalamka ka dhacay ayaa sababay in dawladda dalku go’aamisay gugii ina dhaafay in dib loo soo nooleeyo howlaha difaaca bulshada. Inkastoo aan illaa hadda wax miisaaniyad ah loo qoondayn, sida ay sheegty cilmi-baare Camilla Eriksson.
– Illaa iyo hadda waxaa la go’aamiyay oo keliya iney hayadaha dawladdu dib u eegis ku sameeyaan qorsheeynta howlaha difaaca bulshada, hase yeshee laga war-dhowrayo in miisaaniyad loo qorsheeyo iyo in kale.
Xerada xoolaha ee Rånäs ayuu lo’lay Thomas Bäck ka xun yahay tabaabusho la’aanta dalka ka jirta.
– Waa xaalad aad dhaawac u keeni karta. Haddaan magaalo degenaan lahaa waan ka welwelsanaan lahaa, haddii ciyaar ciyaar laga baxo waa xaalad in muddo ahba wax yar la hadal hayay.